Zucchini voatono - Fomba Fanamboarana
Torohevitra Sy Hevi-Dehibe!
avy aiza ny steak ribeye
ahoana no anaovanao lovia antipasto
taco mafana atsobaka amin'ny fromazy fanosotra
mandra-pahoviana no mahandro pie hena
afaka mahandro betiravy ao anaty microwave ve ianao?
© Copyright ©2021 All rights reserved pmc2019.pt | Politika Fiarovana Fiainan'Olona
Zucchini voatono no lafiny fahavaratra tonga lafatra ho an'ny sakafo rehetra! Ny silaka zucchini maivana sy misy tsiro dia omena ny grill tonga lafatra ary rakotra ranom-boasarimakirana ho an'ny daka vaovao sy tsotra.
mandra-pahoviana handrahoana peppers maintso
Tiako ny manao barbecue amin'ny fahavaratra, ary ho hitanao eo anoloan'ny makarakara 8 andro amin'ny fanaovana 10 aho fonosana salmon foil na Tono akoho mora nono . Rehefa mahandro lovia lehibe eo amin'ny makarakara aho dia hitako fa mora kokoa ny manamboatra lafika iray izay azo masaka amin'ny grill ihany koa!
Zucchini voaendy no fomba tonga lafatra hametrahana sakafo mora amin'ny grill. Mandeha tsara miaraka amin'ny sakafo rehetra izy io, sady haingana no tsotra koa. Ny menaka oliva sy ny voasarimakirana dia mamorona ‘marinade’ matsiro izay tsy handresy ny tsiron'ny kininina!
Ahoana ny fomba fikarakarana zucchini
Tiako ny manamboatra zucchini voaendy , fa amin'ny volana fahavaratra dia sakaizako ilay grill! Tsy misy na inona na inona toy ny sakafo eny an-tsompitra miaraka amina tsiranoka somary setroka masaka eo ambonin'ny tokontany. Raha izaho matetika dia mahavita Legioma marinina voahandro , Manana ZONOKAZAZARAZARA foana aho avy amin'ny zaridaina ka manao zucchini matsiro be koa izahay!
Mba hanaovana zucchini masaka…
Raha mampiasa satroka hazo dia alemana anaty rano.
Hetezo zucchini ho sombin ¾ ”-1 ″.
Atsipazo menaka oliva, tsiro ary voasarimakirana iray
Asio kofehy ny totozy ary atsio mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 minitra na mandra-pahatongan'ny felana malefaka.
Omeo voasarimakirana (na parmesan) fanampiny ary aroso.
aiza no hividianana gilasy cookie siramamy
Resety Zucchini bebe kokoa tianao
Salady Zucchini (mihodinkodina) - Vaovao sy haingana!
Sako Chocolate Zucchini Chip Chocolate
Zucchini Brownies miaraka amin'ny fanala 1 Minitra - Adala tsara, mando ary sôkôla!
Crispy Oven Baked Parmesan Zucchini Fries - Lavorary toy ny lafiny na tsakitsaky!
Fonosana vita amin'ny akoho parmesan
Mandra-pahoviana no handrahoana Zucchini
Zucchini voaendy mahandro haingana, noho izany dia mila maka antoka ianao fa mijery azy io mandritra ny andronao. Tsy misy olona mankafy sakafo matavy!
Ny vilaninao dia tokony hafanana alohan'ny antonony alohan'ny manomboka mahandro azy ireo ianao. Apetraho eo amin'ny grill ny zucchini masakao ary andrahoy mandritra ny 3-5 minitra eo amin'ny lafiny tsirairay. Vantany vao masaka amin'ny lafiny roa izy ary malefaka nefa mbola marokoroko (tokony hihazona tsara ny endriny izy), esory avy eo ny makarakara ary ankafizo eo noho eo!
Fotoana fanomanana5 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo3 minitra Fotoana manontolo8 minitra Fanompoana4 People MpanoratraHolly Nilsson Ny silika zucchini maivana sy misy tsiro dia omena ny grill tonga lafatra ary rakotra ranom-boasarimakirana ho an'ny daka vaovao izay tsy ho azonao avy amin'ny lovia hafa. pirinty Pin
▢rOA zucchini antonony
▢rOA tablespoons menaka oliva
▢½ sotrokely vovoka tongolo lay
▢1 voasary makirana fampiasana mizara
▢sira sy dipoavatra manitra mba hanandrana
Afanaina aloha ny grill aotrika.
Slice zucchini tokony ho thick 'matevina ary apetraka ao anaty lovia.
Manampia menaka oliva, vovoka tongolo lay, sira sy poivre. Kitiho eo ambonin'ilay zucchini ny antsasaky ny voasarimakirana ary atsipazo hifangaro.
Apetaho amin'ny zotom-boankazo ny zucchini ary atsio 3-5 minitra isaky ny lafiny na mandra-pahatongan'ny felam-bolo. Esory amin'ny grill ary apetaho eo amboniny ny voasarimakirana sisa.
Manompoa eo noho eo.
Fampahalalana momba ny sakafo
Kaloria:87,Karbohidraty:5h,Proteinina:1h,Tavy:7h,Tavy mahavoky:1h,Sodium:8levitra,Potasioma:293levitra,Fibre:1h,Sugar:3h,Vitamina A:195IU,Vitamina C:31.8levitra,Kalsioma:2. 3levitra,Vy:0,5levitra
(Ny fampahalalana momba ny sakafo omena dia tombantombana ary hiova arakaraka ny fomba fahandro sy ny marika fangaro ampiasaina.)
Teny lakilezucchini natsatsika Mazava ho azySakafo an-daniny masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Avereno ity lovia fisakafoanana mora ity
Saladin'ny Tuna mahazatra
Saosy hena mora
Ahoana ny fomba fambolena voanio
Ahoana ny fomba hijerena ny atody raha misy freshness!
Dibera namboarina namboarina
Akoho sy paty Crock Pot
Holatra Holofan'ny Pizza
Ahoana no hataonao? (+ 15 Grab & Mandehana Sakafo Snacks tsara be)! #BeActiv
Kopa Oreo Dirt
Ovy voahono sakay